Appt 4 abantu, ehlaziyiweyo, eqaqambileyo, iziko imbali - I-Airbnb
Appt 4 abantu, ehlaziyiweyo, eqaqambileyo, iziko imbali
60m2 endlini ngokupheleleyo elinomtsalane ngemiqadi kungafihlwa yaye amatye indlela Mandulo ibekwe kwindawo yimbali ye Figeac kufutshane neholo lemarike, loo descripts indawo, i CHAMPOLLION Museum, ilitye Rosetta, iindlela Saint Jacques de Compostelle.
Ibekwe ngokufanelekileyo ukonwabela imakethi yakusasa ngoMgqibelo kunye neemveliso zengingqi, ingekude kwezinye iindawo zabakhenkethi ezifana neSt Cirq-Lapopie; Iikhontshi; Pech Merle emiqolombeni, Padirac emhadini, Rocamadour
Ulwazi nge-Covid19: Ukuthuthuzela kunye nokhuseleko lwakho ngaphambi kokufika kwakho, igumbi lethu licocwa ngokucwangcisiweyo ngemveliso ye-virucidal, isisombululo se-hydro-alcoholic siyafumaneka kwaye yonke ilinen yasekhaya icocwa kwinkonzo yokucoca eyomileyo.
-Igumbi lokuhlala elikhulu elinelanga le-35 m2 elinesofa eguqukayo / ibhedi, iTV enkulu yeLed
-ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo (ifriji / isikhenkcezisi; umenzi wekofu we-espresso, i-microwave, i-oveni, umatshini wokuhlamba izitya) kunye nesiqithi esiphakathi
- igumbi lokulala elinebhedi enkulu ye-160x200 kunye nebhedi yokutsala abantu ababini; isifuba sedrowa kunye ne-wardrobe.
-Igumbi lokuhlambela le-6 m2 elineshawa, iWC.
Indawo yokupaka yasimahla inokwenzeka kwi-20m ukusuka kwiflethi.
Ibekwe kakuhle kakhulu ukutyelela iFigeac, ukonwabela imakethi yakusasa ngoMgqibelo kunye neemveliso zengingqi
KUBALULEKILEYO: Ixabiso libandakanya ukucocwa kunye nokunikezelwa kwelinen (Amashidi kunye neetawuli)
4.90 · Izimvo eziyi-68
Indawo ezolileyo kwiimitha ezimbalwa ukusuka kumbindi wesixeko kwaye kufutshane nepaki yeemoto zoluntu
Ukuphendula ngokukhawuleza nge-imeyile okanye ngeSMS kwaye kufumaneka ngefowuni ngokunjalo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Figeac